Fanohanana ireo Mpiandraikitra ato amin’ ny Fiangonana - Henry B. Eyring
Aroso mba ho tohanantsika i Thomas Spencer Monson amin’ ny maha-mpaminany sy mpahita ary mpanambara azy, ary Filohan’ ny Fiangonan’ i Jesoa Kristy ho an’ ny Olomasin’ ny Andro Farany, i Henry Bennion Eyring amin’ ny Maha-Mpanolotsaina Voalohany azy ao amin’ ny Fiadidiana Voalohany, ary i Dieter Friedrich Uchtdorf amin’ ny Maha-Mpanolotsaina Faharoa azy ao amin’ ny Fiadidiana Voalohany.
Ireo izay miombo-kevitra amin’ izay dia afaka maneho izany.
Aroso mba ho tohanantsika i Boyd Kenneth Packer amin’ ny Maha-Filohan’ ny Kôlejin’ ny Apôstôly Roambinifolo azy, ary ireto manaraka ireto amin’ ny maha-mpikambana azy ireo ao amin’ izany kôlejy izany: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ary Neil L. Andersen.
Ireo izay miombon-kevitra dia aoka haneho izany.
Izay manohitra dia afaka mampiseho izany koa.
Aroso mba ho tohanantsika ireo mpanolotsaina ao amin’ ny Fiadidiana Voalohany sy ireo Apôstôly Roambinifolo amin’ ny maha-mpaminany sy mpahita ary mpanambara azy ireo.
Izay rehetra miombon-kevitra dia aoka haneho izany.
Izay manohitra, raha sendra misy, dia aoka haneho izany koa.
Ny Loholona Claudio R. M. Costa dia nisaorana tamin’ ny naha-mpikambana azy tao amin’ ny Fiadidian’ ireo Kôlejin’ ny Fitopololahy.
Ireo izay afaka miaraka aminay maneho fankasitrahana azy, dia aoka haneho izany.
Aroso mba ho tohanantsika ny Loholona Tad R. Callister ho mpikambana ao amin’ ny Fiadidian’ ny Fitopololahy.
Izay rehetra miombo-kevitra amin’ izany dia aoka haneho izany.
Aroso amintsika mba hisaorana ny Loholona Gary J. Coleman, Richard G. Hincley, Yoshihiko Kikuchi, sy Carl B. Pratt, ary Cecil O. Samuelson tamin’ ny naha-mpikambana azy ireo tao amin’ ny Kôlejy Voalohany ao amin’ ny Fitopololahy ary hanendry azy ireo ho Manampahefana Ambony misotro ronono.
Aroso amintsika ihany koa mba hisaorana ny Loholona Won Yong Ko, sy Lowell M. Snow, ary Paul K. Sybrowsky tamin’ ny naha-mpikambana azy ireo tao amin’ ny Kôlejy Faharoa ao amin’ ny Fitopololahy.
Ireo izay maniry hiara-haneho aminay ny fankasitrahana an’ ireo rahalahy ireo noho ny asa fanompoana tsara dia tsara nataon’ izy ireo dia aoka haneho izany.
Ny Loholona isany Ralph W. Hardy Jr., Jon M. Huntsman Sr., Aleksandr N. Manzhos, and J. Willard Marriott Jr. dia nisaorana tamin’ ny naha-Fitopololahin’ ny Vondrom-paritra azy ireo.
Aroso amintsika ny hanehoana fankasitrahana azy ireo noho ny asa fanompoana niavaka nataon’ izy ireo.
Izay rehetra miombon-kevitra amin’ izany dia aoka haneho izany.
Aroso amintsika ny hanohanana ireo Manampahefana Ambony hafa, sy ireo Fitopololahin’ ny Vondrom-paritra, ary ireo fiadidian’ ny vondrona fanampiny maneran-tany araka ny rafitra misy ankehitriny.
Ireo izay miombon-kevitra, dia aoka haneho izany.
Raha misy manohitra dia aoka haneho torak’ izany koa.
Ry Filoha Monson, araka ny fahitako azy dia niray hevitra nanohana ny tato amin’ ny Foiben’ ny Fihaonambe.
Misaotra anareo ry rahalahy sy anabavy, ny amin’ ny fanohananareo, sy ny finoanareo, sy ny fanoloran-tenanareo ary ny vavakareo.
MalagasyBahasa IndonesiaCebuanoČeskyDanskDeutschEnglishEspañolFaka-tongaFrançaisGagana SamoaItalianoMagyarMalagasyMalagasyNederlandsNorskPolskiPortuguêsReo TahitiRomânăShqipSuomiSvenskaTagalogTiếng ViệtVosa vakavitiБългарскиРусскийУкраїнськаՀայերեն日本語